जब विष्णु रिमालले योगेशलाई ‘माक फुँई’ भने…. – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal January 3, 2018 | १९ पुष २०७४, बुधबार १२:३१
काठमाडौं । माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टी एकता भएपछि शीर्ष नेताहरुले सन्यास लिएर नेल्सन मण्डेला जस्तो बन्नुपर्ने भन्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको भनाई एमालेभित्रै विवादित बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनको भनाईको प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ ।
एमालेकै अध्ययनशील मानिने विष्णु रिमालले त योगेशको भनाईमा प्रतिक्रिया मात्र जनाएनन्, योगेशलाई ‘माक फुँई’ सम्म भन्न भ्याए । माका फूईं भनेको नेवारीमा बाँदरको जस्ता फुर्ती भन्ने अर्थ लाग्छ । र्हेनुस् उनको ट्वीट:-
निर्वाचन अघि अब बन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर सार्वजनिक भाषण गरेका योगेशले यति छिट्टै किन शीर्ष नेताले सन्यास लिनु पर्ने बताए त्यो उनै जानुन् । तर ओलीका निकट मानिने रिमाललाई योगेशको पछिल्लो अभिव्यक्ति पच्न सकेन । हुनपनि योगेशलाई जिताउन केपी शर्मा ओली खुद् ताप्लेजुङ नै पुगेका थिए । दुई पटक काठमाडौंबाट हारेका योगेशलाई जिताउनु एमालेका लागि प्रतिष्ठाको बिषय पनि बनेको थियो । त्यहि भएर त केपी ओलीले योगेशको चुनावी सभामा खुलेरै योगेशलाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो सम्म भने ।
पार्टीमा फरक गुटका योगेशलाई अध्यक्षले यति धेरै काखी च्याप्दा उनकै गुटका नेताहरुले भित्रभित्रै इस्र्या गर्नु स्वाभाविक नै थियो तर सार्वजनिक गरेका थिएनन् । जब ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर गठबन्धनले बहुमत ल्याएको यथार्थ भुलेर योगेशले लोकप्रियता जनाउन अभिव्यक्ति दिए, ओली गुटका नेताहरुको इस्र्या छताछुल्ल हुन थाल्यो । माका फूईं भन्ने शब्दको प्रयोगलाई पनि यहि सन्दर्भमा जोडेर र्हन सकिन्छ । माक फुँई एमाले अध्यक्ष ओलीले नै नेपाली राजनीतिमा कसैलाई गाली गर्दा भित्र्याएको शब्द हो । ओलीले माओवादीको सडक आन्दोलनका विरुद्ध बोल्दा यहि शब्द प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
यसैगरी एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पनि ‘माइकालाल’ शब्द प्रयोग गर्ने श्रेय जान्छ ।
आफू विरुद्ध विष्णु रिमालले माक फुँई प्रयोग गरे पनि योगेशले रिमालको ट्रवीटको प्रतिउत्तर शालिन ढंगले दिएका छन् । हेर्नुस् उनको ट्वीटः–
सामाजिक सञ्जालमा यि दुबै नेताको ट्वीट र्हेदा एक पक्षले भट्टराईलाई गाली गरेका छन् भने अर्को पक्षले रिमाललाई । भट्टराईलाई गाली गर्ने ओली गुटका स्पष्ट चिनिन्छन् भने रिमाललाई गाली गर्ने नेपाल गुटका जस्ता लाग्छन् । सामाजिक सञ्जालमा दुबै एमाले नेताका ट्वीट दन्तबजानलाई काँग्रेस निकट मानिनेहरुले भने आनन्दपूर्वक सेयर गरेको देखिन्छ ।
एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने अधिकार प्रचण्डसँग, के गर्लान् प्रचण्डले ?
Be the first to comment on "जब विष्णु रिमालले योगेशलाई ‘माक फुँई’ भने…."